ချစ်သက်တမ်း (၂) နှစ်ပြည့်လေးမှာ ဘေဘီမောင်အတွက် ရင်ထဲကချစ်စကားလေးတွေဆိုခဲ့တဲ့ သားဂန်း - Cele Gabar
ချစ်သက်တမ်း (၂) နှစ်ပြည့်လေးမှာ ဘေဘီမောင်အတွက် ရင်ထဲကချစ်စကားလေးတွေဆိုခဲ့တဲ့ သားဂန်း
By RainowPosted on August 12, 2020
သီချင်းအေးအေးလေးတွေ သီဆိုပြီး ပရိသတ်အသည်းကိုခြွေယူတတ်တဲ့ သားဂန်းကတော့ ဒီနေ့မှာလည်း ဘေဘီမောင်ရဲ့အသည်းကို ကြည်နူးစရာချစ်စကားလေးတွေနဲ့ ခြွေယူလိုက်ပြန်ပါပြီ။ သူတို့နှစ်ဦးကတော့ မနဲ့မောင် အတွဲလေးဖြစ်သလို တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အရမ်းချစ်တတ်လွန်းတာကြောင့် ပရိသတ်တွေအားကျနေရတဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲလေးပါ။
ဒီနေ့လေးကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ချစ်သက်တမ်း (၂) နှစ်ပြည့်နေ့လေးဖြစ်ပြီး သားဂန်းကတော့ ” Happy Anniversary My lovely… သတိတရရှိပေးတဲ့ We Love ညီ ညီမလေးတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ… ဒီကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးမှာ သူမရင်ခွင်တစ်ခုကိုပဲ တမ်းတမ်းတတဖက်တွယ်ခဲ့တာ… သူမ ရှိနေရင် ကဣစ္ဆာသယ ပမာ…. ကျတော့ဘဝပြည့်စုံခဲ့တာပါ…. ကျတော့တို့ချစ်ခြင်းမှတ်တိုင်(၂) နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီလေ” ဆိုပြီး အကြင်နာစကားလေးတွေနဲ့ ချစ်သက်တမ်း(၂) နှစ်ပြည့်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း ရေးသားမျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ သူတို့ကိုချစ်တဲ့ အမာခံပရိသတ်တွေဆီကနေလည်း သတိတရလာပေးတဲ့ နှစ်ပတ်လည်လက်ဆောင်လေးတွေ လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်း မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…
ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေတတ်တဲ့ဘေဘီနဲ့ ဘေဘီဆိုးသမျှ အစ်ကိုတစ်ယောက်လို သည်းခံပြီးချစ်ပေးတတ်တဲ့ သားဂန်းတို့ အတွဲလေးကတော့ တကယ်ကို ရွှေလက်တွဲမြဲမယ့် အတွဲလေးပါပဲ ပရိသတ်ကြီးရေ.. နှစ်ပတ်လည်နေ့တိုင်းကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပြီး ဒီထက်မက တိုးတိုးပြီး ချစ်နိုင်သွားပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source – Thar Gan
Posted in Cele NewsTagged Baby Maung, Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Myanmar Cele, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, Thar Gan, ဆယ်လီ, ဆယ်လီကမ္ဘာ, ဆယ်လီမြန်မာ, ဘေဘီမောင်, မြန်မာဆယ်လီ, သားဂန်း
Previous post မွေးနေ့လေးမှာ သူ့ရဲ့ခံစားချက်တွေကို မျှဝေလာတဲ့ စန္ဒီမြင့်လွင်
Next post ပြိုင်ပွဲတုန်းက ပရိသတ်တစ်ခဲနက်အားပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးကို ပြန်လည်သီဆိုလိုက်တဲ့ အေးမြဖြူ